China ihagu eboyiweyo ngomzi mveliso ogciniweyo kunye nabenzi | Huikang
Imifuno ekhawulezileyo efriziweyo
Iintonga zeTissue eziBilisiweyo eziBilisiweyo
Iifatata eziCociweyo eziCociweyo
Frozen Diced Sika itswele
Frozen Diced Sika iminqathe
Ulwimi lweNkomo olubilisiweyo
Iingceba zeengulube ezibilisiweyo
Iinkuni zeNgulube ezibilisiweyo
Ihagu eBraved Egciniweyo
Inyama yehagu ebilisiweyo sisitya esaziwayo esaziwayo, kwaye ukutya okuphekwayo okuyintloko nganye inehagu yayo ekhethekileyo eyosiweyo. Isebenzisa isisu sehagu njengeyona nto iphambili, kwaye kungcono ukusebenzisa amanqatha kunye nenyama ecekeceke yenyama enemigca emithathu (isisu sehagu). Imbiza ikakhulu casserole. Inyama ityebile kwaye ibhityile, iswiti kwaye ithambile, ityebile kwisondlo, kwaye iyanyibilika emlonyeni.
Ingulube ebrukiweyo kwisosi emdaka isasazeka kwilizwe lethu lonke. Zininzi iindlela ezingama-20 okanye ezingama-30, ezinexabiso elithile lesondlo.
Ziqhelise ibe nye
Izithako: isisu sehagu, isosi yesosi, i-anise yeenkwenkwezi, ijinja, ipepile, ioyile ye-hemp, iswekile yelitye, igalikhi, ityuwa
1. Lungisa izithako, uhlambe isisu sehagu kwaye usike iziqwenga ze-mahjong;
2. Fudumeza imbiza ngeoyile yesesame, susa ijinja, ikonofile, ipepile kunye nenkwenkwezi;
3. Phalaza isisu sehagu kwaye ujijise de omabini amacala atshiswe kancinci, yongeza iwayini okanye iwayini emhlophe, isosi yesoya, iswekile yerwala;
4. Dlulisela embizeni ye-casserole ngesixa esifanelekileyo samanzi abilayo, kwaye yibilise kangangeyure kubushushu obucothayo. Kuyimfuneko ukuba ujike rhoqo, kwelinye icala, imibala imbiza ngokulinganayo, kwelinye icala ukunqanda ukunamathela kolusu lwehagu embizeni. Vele ufefe ipepile kunye netyuwa ngaphambi kokukhonza.
5. Phaka kwaye usete ngokufanelekileyo, ukutya kuya kuba ngcono.
Ziqhelise zibe mbini
1. Sika ulusu lwenyama yengulube lube ngamaqhekeza asikwere, usike itswele kunye nejinja kwizilayi ezinkulu.
2. Beka ioyile embizeni ukuze ushushu, yongeza iswekile emhlophe kwaye ugovuze ifry. Xa ijika ibe ngumbala weswekile, yongeza inyama, yongeza inani elifanelekileyo lamanzi, ixesha lesosi yesosi, ityuwa, iswekile, itswele eluhlaza, ijinja, i-anise yeenkwenkwezi, amagqabi e-bay, kunye nesityu kubushushu obuphantsi. -Seka kwiiyure eziyi-1.5.
Egqithileyo I-Chicken Chop kunye nePepper
Okulandelayo: Inyama yenkomo yefillet yaseSichuan kunye neHunan
I-anyanisi efriziweyo efriziweyo
INQWELO-MOYA YASEMZANTSI ZHENGDING SHIJIAZHUANG HEBEI CHINA
Ifowuni: 0086- (0) 755-82450060
Ungabatsala njani abaThengi kwiNyama yeNdu ...
Uyenza njani inyama ngeNzululwazi kusapho
Ukhuseleko kunye noLwazi lwezeMpilo ukuba uKutya komntu ...